Vaayrasiin koroonaa gara Ityoophiyaa erga galee booda namoota miiliyoona 2 oliif qorannoon taasifamera – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Vaayrasiin koroonaa gara Ityoophiyaa erga galee booda namoota miiliyoona 2 oliif qorannoon taasifamera
On Jun 11, 2021 26
Finfinnee, Waxabajjii 4, 2013 (FBC)- Vaayrasiin koroonaa erga gara Ityoophiyaa galee waggaa 1 fi Baatiiwwan 5 keessaatti namoota miiliyoona 2 fi kuma dhibba 7 fi kuma 64 qorannoon taasifamuu ibsameera.
Ministeerri Fayyaa fi Ministeerrii Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo waloon kan qopheesan yaa’iin vaayrasii koroonaarratti xiyyeeffaannoo taasisee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira.
Guyyoota lamaaf kan turu yaa’ichi ittisaa vaayrasichaaf qorannoowwan rakkoo furan qorattoonni yuunvarsiitiiwwan Finfinneerra walitti babba’aan qorannoo ni dhiyeessuu jedhameera.
Hanga ammattis ogeeyyiin fayyaa kumni 3 fi 329 vaayrasii koroonaatin yoo qabaman, 36 kan ta’aan lubbuun isaanii darbu ibsameera.
Itti aanaa daayreektara Inistityuutii Fayyaa Hawaasa Ityoophiyaa obbo Aschaalaaw Abbayinaa, yeroowwan rakkisaa darban keessaa hojiiwwan hojjetaman dhiibbaa weerarichii qaqqabsiisuu hiri’suu himaniiru.
Ministir Deettaan Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota olaanoo Dooktar Muluu Naggaa gama isaaniitin, Ityoophiyaatti kan argaman dhaabbilee barnootaa fi leenjii hojii hojjetaniin bu’aa gaarii argamsiisuusaanii ibsun kunis cimee itti fufuu qaba jedhaniiru.
Afawarq Iyyaayuutu gabaase
Waldichi Waldaa Fannoo Diimaa Chaayinaarraa talaallii Covid -19 kuma dhibba 1…
Filattoonni of eeggannoo covid-19 taasisuu akka qaban Inistityuutiin Fayyaa Hawaasa…
Aadde Heeraan Garbaa Badhaasa guyyaa Sigaaraan itti hin aarfamnee bara 2021 moo’atan
Ministeera Fayyaaf deeggarsi qorichoota Birrii miiliyoona 1.7 baasuu taasifame
Waldichi Waldaa Fannoo Diimaa Chaayinaarraa talaallii Covid…
Filattoonni of eeggannoo covid-19 taasisuu akka qaban…
Aadde Heeraan Garbaa Badhaasa guyyaa Sigaaraan itti hin…